चलचित्र Archives | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखा । गोरखाको मनास्लु क्षेत्र आसपासको कथाबस्तुलाई आधार बनाएर नेपाली फिचर फिल्म तयार चलचित्र ‘मन्त्र’को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । शुक्रबार राजधानी काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक
गोरखाको मनास्लु क्षेत्र आसपासको कथाबस्तुलाई आधार बनाएर नेपाली फिचर फिल्म तयार भएको छ । नुब्री उपत्यकाको हिमाली प्रेम कथामा आधारित चलचित्र ‘मन्त्र’ निर्माण गरिएको सहनिर्माता वीरबहादुर लामाले जानकारी दिए ।
‘समाजले महिला भनेर औंला उठाइरह्यो’ काठमाडौं : जनयुद्धताका आमा हिसिला मानुषीलाई सम्झाउँथिन्- ‘तिम्रो आमाबुवाको ज्यान खतरामा छ। त्यसैले तिम्रो ज्यान पनि खतरामा छ।’ लडाईंमा होमिएका नेता कार्यकर्ताका लागि जनयुद्ध कस्तो भयो
अभिनेता विराज भट्टको निर्माण तथा निर्देशनमा चलचित्र ‘साङ्लो’ तयार भइरहेको छ । डोटी जिल्लामा अहिले चलचित्रको गीतको छायांकन भइरहेको छ । यस चलचित्रका लागि डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले विकास बजेटबाट १०
गण्डकी प्रदेशले उत्तरी गोरखालाई फिल्म सिटी र स्याउ पकेट क्षेत्र बनाउने भएको छ । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरी गोरखालाई
एकताका अभिनेताहरू निखिल उप्रेती, राजबल्लभ कोइराला, आर्यन सिग्देल, विराज भट्ट, रमित ढुंगाना, जीवन लुइँटेल र नीरज बराल निकै चर्चित र व्यस्त थिए । भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, राजेश हमाल, दिलीप
दरौंदी ः उत्तरी गोरखाका गुरूङ समुदायले बोल्ने भाषा, सँस्कार र संस्कृतिमा आधारित पहिलो चलचित्र ‘फुङ’ यहि पुस ६ गतेबाट प्रदर्शन हुने भएको छ । लामो समयको बिबादका कारण निर्माण भएर
असोज महिनाको अन्त्यसँगै यो बर्षका ६ वटा महिना पनि सकिएका छन् । ६ महिना सकिदा नेपाली चलचित्रका लागि सुखद वा दुखद के रह्यो भन्ने बारेमा चर्चा गरौ । नेपाली चलचित्रका
गायक अनिषलाई गलफ्रेण्डका बाउले तोरी फुल देखाएर हैरान (भिडियो सहित)
दरौदी ः नेपाली लोक तथा दोहोरी गितको क्षेत्रमा पछिल्लो समय उदयमान नाम हो अनिश दवाडी । लम्जुङको विचौरमा जन्मेका दवाडीको केही दिन अघि मात्रै एउटा कमेडी बजारमा आएको छ ।
गोरखाली गायक विष्णु खतिवडाले गित मार्फत भने ‘बलत्कारीलाई फाँसी दिने बनाउ संविधान’ (भिडियो सहित)
दरौँदी ः कन्चनपुरकी बलत्कृत वालिका निर्मला पन्तको घटनालाई आधार बनाई गित बनाइएको छ । गोरखाली गायक विष्णु खतिवडाले बत्कार गर्नेलाई फाँसी दिने संविधान बनाउन गित मार्फत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्